ओलीले निर्णय गरेको केहि घण्टा नहुँदै, खनाल र नेपाल समूहले गर्यो आकस्मिक रुपमा यस्तो निर्णय – NepalajaMedia
ओलीले निर्णय गरेको केहि घण्टा नहुँदै, खनाल र नेपाल समूहले गर्यो आकस्मिक रुपमा यस्तो निर्णय
March 12, 2021 153
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वुटवल पुगेर अब माधव कुमार नेपालको समुहले पार्टी क ब्जा गर्छन भनेर घोषणा गरेकै बेला यता काठमाडौमा भने माधव नेपाल समुहका सबै नेताको पद खोसियो । आज बसेको नेकपा एमाले केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष र महासचिव वाहेक सबै पद खारेज गरेको हो ।
माधव नेपाल पक्षका सबै नेताको पद खोसेका ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई वाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज तोकेका छन् । असार २०७१ मा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी एकता खारेज गर्दै पुर्ववत अवस्थामा फर्कन आदेश दिएपछि ओली फेरी नेपाल पक्षसंगको संघर्षको अवस्थामा थिए ।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग सडकमा संगै रहेका नेपाल सर्वोच्चको निर्णय पछि एमालेमै फर्कने निर्णयमा पुगेका थिए । उनको समुहले एमालेमै रहेर ओली प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्ष गरेका थिए । आज नै वुटवलमा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्न पुगेका प्रचण्डले नेपाल समुहले कि एमाले क ब्जा गर्ने कि वि द्रोह गर्ने दुई विकल्प रहेको बताएका थिए ।
उनले यस्तो बताइरहँदा काठमाडौमा भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले माधव नेपाल समुहका सबै नेताको पद खोसेको छ । माओवादी केन्द्रवाट आएर आफ्नो साथमा रहेकाहरुलाई प्रदेश इन्चार्ज लगायतको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब माधव पक्षले के गर्ला भन्ने सबैको चासो छ । यस्तो अवस्थामा अब माधव पक्षका नेताहरुको कदम के हुन सक्ला ? नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आउँदो मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म हुने भएको छ ।
कि सोही मिति सम्म आफ्ना गतिविधि जारी राख्ने, विद्रोह गर्ने नयाँ सत्ता समिकरणको प्रयास गर्ने । नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले बनाएका सबै कमिटी र जनसंगठनका नेतृत्वसमेत हाललाई यथावत रहने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा जानकारी दिएका छन् ।
ओलीले अर्को बैठक चैत ७ गते बस्ने जानकारी दिदै आजको बैठकमा नआएका माधव नेपालहरुलाई पनि जानकारी दिन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘खबर गर्न छुट्नुभएकाहरुलाई अर्को बैठकमा खबर गर्नू । माधवजीहरुलाई खबर पुगेको रहनेछ भने पनि पुर्‍याइदिनू । आउनु हुन्छ कि आउनुहुन्न तर पनि खबर चाहिँ गर्नुपर्छ ।’
यो निर्णयसंगै नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार महासचिवबाहेकका पदाधिकारीहरु हटाउने, आफ्ना समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने र एकतर्फी रुपमा गरेको महाधिवेशनको मिति घोषणापछि खनाल-नेपाल समूहले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो ।
यो निर्णय पछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएकोबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन्।
बैठकले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारी भंग गर्दै आउँदो मंसिरका लागि महाधिवेशन मिति तोकेको छ। तर, यस विषयमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको भए हामीलाई जानकारी हुनुपर्ने हो, केही थाहै छैन। सबै घटनाक्रम बुझेर मात्रै कमेन्ट गर्दा राम्रो होला’ पन्तले भने।
यस्तै सेतो पाटीका अनुसार शुक्रबार बैठकबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नभएको नेपाल पक्षका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए। ‘उहाँहरूले के(को बैठक गर्नुभएको हो। हामीलाई जानकारी दिइएको थिएन,’ ज्ञवालीले भने,‘के(के निर्णय गर्नुभयो रे भन्ने मिडियाबाट सुनेको छु। साथीहरूसँग सल्लाह नगरी अहिले केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।’ बालुवाटारको बैठकले कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज रहेका ज्ञवालीको पनि जिम्मेवारी खोसेको छ।
माधव नेपाल पक्षका नेता अमृतकुमार बोहोराले एमालेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलगायतका निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ओलीले चालेको यो कदमलाई घोर षडयन्त्र भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिकार गरिने उनले बताए ।
नेपाल प्रेसका अनुसार नेता बोहोराले भने, ‘पार्टी मिलाउनु त कता हो कता, ओलीले निहुँ खोज्ने काम गरे । हामी त्यसको सामनासँगै प्रतिकार गर्छौं ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले एक हुने सम्भावना हुँदाहुँदै अध्यक्ष ओली पेलेरै अघि बढ्न खोजेको उनको आरोप छ ।
‘ओलीले हामीलाई सिध्याउनै खोजेका छन्, तर त्यस्तो हुँदैन । हामी सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं,’ बोहोराले भने । एमालेको ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षलाई बाइपास गर्दै केन्द्रीय कमिटी विस्तारसँगै तथा विभिन्न कमिटी पुनर्गठन गरेको छ ।
Prevदुबई पुलिसको जागिर छाडेर लोकल कुखुरा पाल्दै यि सुन्दरी कमाण्डर ! माओवादी छाडेपछि करोडको आम्दानी (भिडियोसहित)
Nextपाथिभरा माताको दर्शनगरी फागुन २९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
जसले आकाशबाट खसेको ढुंगा जम्मा पारेर कमाउन करोडौं रुपैया
कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने नारा लागू गर्नेछु : मन्त्री राई
दक्षिणायनको अन्तिम औँसी आज, पितृलाई श्रद्धापूर्वक तर्पण र पिण्डदान गरी श्राद्ध गरिँदै